अमेरिकी बजारमा केही औषधिको मूल्य यति छ कि अमेरिकीहरुकै पहुँचभन्दा बाहिर छ । ‘दुजेत्जिना’ नामक कम्पनीले उत्पादन गरेको रक्त क्यान्सरको औषधि ‘रेभ्लिमिड’ ३० दिनको कोर्षको मूल्य २० हजार डलर पर्छ । ‘मेडिकेयर पार्ट फोर’ का बिरामीका लागि यसमा ५ प्रतिशत छुट हुन्छ, जुन महिनाको १ हजार डलर बराबर हुन्छ ।
केही औषधी भने १० लाख डलरको हाराहारीमा पर्छ । बालबालिकाको रेटिनाको समस्याको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने ‘लक्स्टुर्ना’ नामक औषधिको मूल्य ८ लाख ५० हजार डलर बराबर पर्छ । अझ त्योभन्दा हेमोफिलिया बी को उपचारका लागि प्रयोग गरिने ‘एसपीके¬¬ ९००१’ औषधिको मूल्य १५ लाख डलर पर्ने बताइएको छ । तर योचाहिँ स्वीकृतिको प्रक्रियामै छ ।
सबैभन्दा महंगा औषधिका बारेमा अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘गुडआरएक्स’का अनुसार सबैभन्दा महंगा औषधि यी हुन् :
१. एक्टइम्युन : ५२,३२१.८० डलर (प्रति महिना)
‘क्रोनिक ग्रानुलोमाटस’ नामक रोगमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने ‘एक्टइम्युन’ औषधिको मूल्य प्रतिमहिना ५२ हजार डलरभन्दा बढी पर्छ । दुर्लभ खालको हड्डी कमजोर बनाउने यो रोग २ लाख ५० हजार मानिसमा एकजनालाई लाग्ने नेशनल इन्सिच्युट अफ हेल्थको तथ्यांक छ । यो फ्लेस कम्पनीको उत्पादन हो ।
२. डाराप्रिम : ४५००० डलर (प्रतिमहिना)
एक खालको परिजीवीबाट लाग्ने रोगबाट हुने ‘टोक्सोप्लास्मोसिस’ नामक रोगको उपचारमा प्रयोग हुने यो औषधिको मूल्य ४५ हजार डलर प्रतिमहिना पर्छ । यो रोगबाट ६ करोड अमेरिकी प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । यो औषधिलाई ब्येरा फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको हो । डाराप्रिम औषधि सन् १९५२ देखि उत्पादन थालिएको थियो ।
३. सिनरिजः ४४,१४०.६४ डलर (प्रतिमहिना)
आनुवंशिक रोग ‘एन्जिओडेमा’ को उपचारका लागि प्रयोग हुने यो औषधिको मूल्य प्रतिमहिना ४४ हजार डलरभन्दा बढी छ । दुर्लभ खालको यो रोग प्रति १० हजार जनामा एकजनालाई लाग्छ । यो रोग लाग्दा श्वासप्रश्वास प्रणाली अथवा पाचन प्रणालीमा असर पर्छ । यसको निर्माता कम्पनी शायर पीएलसी हो ।
४. चेनोडल : ४२,५७० डलर (प्रति महिना)
शल्यक्रिया गर्न पनि समस्या हुने गलस्टोनका बिरामीले खाने यो औषधिको प्रतिमहिना ४२ हजार डलर पर्छ । यो औषधि रेट्रोफिन कम्पनीले बनाएको हो ।
५. म्यालेप्ट : ४२,१३७.६० डलर (प्रतिमहिना)
लेप्टिन नामक हर्मोनको कमी हुन दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने यो औषधि इन्जेक्सनबाट दिइन्छ । लेप्टिन हर्मोनले मानिसको मेटाबोलिक प्रक्रिया नियन्त्रण गर्छ । यो औषधिले ट्राइग्लिसेराइड, ब्लड सुगर नियन्त्रित गर्छ । यो एजेरियन फर्मास्युटिकल्सले बनाएको हो ।